Saina kuApple beta beta software kuyedza macOS High Sierra | Ndinobva mac
Iyi chirongwa chebeta software chatinoziva tese pari zvino uye chave chiripo kwenguva yakati kune vese vashandisi vanoda kuyedza vhezheni dze beta vasati vaburitswa zviri pamutemo, vachitaura matambudziko anogona kuwanikwa mavari kuitira kuti avo veCupertino vagone kuzvigadzirisa. . Ino nguva mavhezheni aripo izvozvi ndiwo mavhezheni evanogadzira uye aya haasvike kune veruzhinji, saka isu tinofanirwa kumirira inotangwa pachena pakupera kwemwedzi uno waChikumi.
Mune veruzhinji beta vhezheni tinowana imwe neimwe yenyaya dzakaratidzwa munezuro chirevo uye mushanduro dzevanogadzira zviri pamutemo. Mune ino kesi isu tine iyo yakananga webhu kusaina uye kuyedza isati yaburitsirwa munhu wese. Chii chimwe Apple inowedzera nguva ino yeruzhinji beta vhezheni yeTVOS, ichisiya zvese shanduro dze beta dzaiwanikwa chete kune vanogonesa vanogonesa.
Parizvino mavhezheni eruzhinji haawanikwe uye sezvatinogara tichiti chakakosha pano kusashandisa idzi shanduro pabasa pedu Mac sezvo dzingave dziine mabugs kana kusaenderana nematurusi atinoshandisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tea isu tinokurudzira kushandisa yakatsaurwa chikamu chekuisa kunyangwe zvese zvichinyatso shanda chaizvo uye vashandisi vazhinji havana zvichemo. Usakanganwa kuti aya ma beta shanduro uye idzi shanduro dzinoda basa kuti dzishande zana%. Chinhu chakanakisa ndechekuti isu tinogona kushandisa aya beta kuziva nhau uye nemabasa matsva eiyo sisitimu yekushandisa yakapihwa muWWDC keyword, asi isu hatifanire kuzviita seiyo huru OS kudzivirira matambudziko anogona kuitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Saina kuApple beta beta software yekuyedza macOS High Sierra